Mpanamboatra sy mpamatsy fitaratra fitaratra - Orinasa mandro ao Shina
Ny talantalana Glass Tempered dia fomba tsara hanampiana endrika amam-bika eo amin'ny habakabakao nefa tsy mampitombo ny renivohitra.
5mm 6mm 8mm 10mm varavarana fikosoham-baravarankely
Manolotra varavarana misosa fitaratra avo lenta izahay, Avy amin'ny fisafidianana ireo akora sy ny teknolojia fanodinana ary ny fomba fonosana dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Ny vera mitsingevana rehetra dia avy amin'ny Xinyi Glass, izay hampihena be ny tahan'ny fanalefahana tena ao anaty vera. Ny famolahana kalitao avo lenta dia mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny sisiny. Ny jet jet dia manapaka ny lavaka mba hiantohana ny maha-marina ny toerana misy azy ary hisorohana ny fitongilanan'ny varavarana. Ny vera marokoroko dia nandalo an'i Etazonia (ANSI Z97.1, 16CFR 1201-II), Canada (CAN CGSB 12.1-M90) ary ny fenitra Eoropeana (CE EN-12150). Ny sary famantarana rehetra dia azo namboarina, ary ny fonosana dia azo amboarina ihany koa arakaraky ny takian'ny mpanjifa.
Ny loko malaza dia fitaratra mora tezitra, fitaratra milamina mazava, Pinhead tempered glass, Etched clear tempered glass.
6mm 8mm 10mm 12mm varavarana fandroana fitaratra mitafo
Manolotra varavarana fitaratra milamina avo lenta izahay, varavarana fitaratra mahasaraka ny fizarazarana, varavarana fitaratra feno fahamaotinana anaty trano, varavarana fitaratra tsy misy fangarony, varavarana fitaratra miloko volontsôkôlà, varavarana fitaratra miloko volondavenona sns.
Matevina: 1/5 ″, 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″
Flat Edge, Voadio, Hainina fanapahana rano, lavaka fandavahana, feno logo